Guddoomiyihii hore ee Nairobi oo doonaya in guddiga EACC uu soo afjaro howlgalada gurigiisa laga fuliyo – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyihii hore ee Nairobi oo doonaya in guddiga EACC uu soo afjaro howlgalada gurigiisa laga fuliyo
Barasaabkii hore ee caasimadda dalka Dr. Evans Kidero ayaa iska fogeeyay eedeymo la xiriira musuqmaasuqa oo loo soo jeediyay wuxuuna guddiga anshaxa iyo la dagalaanka musuqmaasuqa ee EACC ka dalbaday inuu joojiyo howlgalada sarakiisha ka tirsan ay hooygiisa ka fuliyaan.
Qareenka matalaya Dr. Kidero , Tom Ojienda ayaa ku doodaya in guddiga EACC uu ku xadgudubay xuquuqda la xiriirta waxyaabaha khaaska u ah mas’uulkan.
Waxaa uu maxkamada ka codsaday inay soo saarto amar sarakiisha guddigan ka mamnuucaya inaysan sii wadin howlgalada laga sameeyo guriga Kidero.
Hasa ahaate guddiga EACC ayaa maxkamada u sheegay in Evans Kidero lagu hayo baaritaano ku aaddan musuqmaasuqa sidaasi awgeedna sarakiisha ay howlgalo sameynayaan maadaama ay raadinayaan caddeymo wax ku ool ah oo loo cuskan karo dacwadaha uu wajahayo.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira musuqmaasuqa, toddobo sarkaal oo ka tirsan guddiga qaran ee dhulalka ee NLC aya lagu wadaa inay ka marqaati kacaan eedeymo ku saabsan musuqmaasuqa oo loo soo jeediyay guddoomiyaha guddigaasi Maxamad Swazsuri.
← Shacabka Waqooyi bari oo loogu baaqay inay dowlada kala shaqeyaan amniga
Warbixin ku saabsan waxbarashada caruurta ka yar 8 sano oo maanta la soo bandhigayo →